၅ ခုမြောက် အစိတ်အပိုင်း နှင့် ပါဝါရိမ်းဂျား swing ထရိတ်ဒင်းနည်းဗျူဟာများ
၅ ခုမြောက် အစိတ်အပိုင်း
Fifth element နည်းဗျူဟာရဲ့ အဓိက အားသာချက်က အ၀င်ဈေးဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သင့်ကိုစောစောပြောပြပါတယ်. ဒါ့ကြောင့် သင်က အသေအချာစောင့်ကြည့်ပြီး အကျိုးအမြတ်ရဖို့ အခွင့်အရေးကို အမိအရဖမ်းယုံပါဘဲ.
အချိန်ကာလ - H1 နှင့် H4
ထရိတ်ဒင်း tool များ - EMA 12 အမြန်၊ EMA 26 အနှေး၊ MACD SMA9တို့ဖြစ်ပါတယ်
ငွေကြေးအတွဲများ - ယူရို/ဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာ/ယန်း၊ ပေါင်/ဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာ/ဆွစ်ဖရန့်၊ ဒေါ်လာ/ကနေဒါဒေါ်လာ နဲ့ နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ/ဒေါ်လာတို့ ဖြစ်ပါတယ်.
MACD histogram ဂရပ်ဟာ ဈေးကွက် လားရာနဲ့အဟုန်ကို ညွှန်ပြပါတယ်. MACD histogram က အနုတ်ကနေ အပေါင်းပြောင်းသွားခဲ့ရင် အဟုန်နဲ့ အတက်ဖြစ်တော့မယ် အချက်ပြောနေတာပါ. သင် ထိုအဟုန်ကို အတည်ပြုဖို့ အခုမြောက်ဘားမှာ (ဒါကို အစွဲပြုပြီး fifth element ၅ ခုမြောက် အစိတ်အပိုင်းလို့ အမည်ပေးထားတာပေါ့ Luc Besson ရဲ့ ဇာတ်ကားကမဟုတ်ဘူးနော်) အ၀ယ်မဖွင့်ခင် အပေါင်း ၅ ဘားစောင့်သင့်ပါတယ်. အကယ်၍ MACD histogram အပေါင်းကနေ အနုတ်ကိုပြောင်းသွားရင် သင်ရောင်းထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုပါတယ် (fifth bar စည်းမျဉ်းက အားကောင်းနေတုန်းပါ).
၁။ MACD histogram ဂရပ်က အနုတ်ကနေ အပေါင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ထိ စောင့်ပါ.
၂။ ၅ ခုမြောက်ဘားအဖွင့်မှာ ဈေးကွက်ကို အ၀ယ်မဖွင့်ခင် အပေါင်း ဘား ၄ခု ပေါ်အောင်စောင့်ပါ.
၃။ stop loss ကို histogram ရဲ့ နောက်ဆုံး low မှာ ထားသင့်ပါတယ်.
သင့်မှာ အမြတ်ရနိုင်မဲ့ ပစ်မှတ် ၂ခု ရှိပါတယ်. risk to reward စွန့်စားမှုနှင့်အောင်မြင်မှုအချိုးက ၁း၁ နဲ့ ၁း၂ တို့ အစဉ်လိုက်ပါ. ဥပမာ အကယ်၍ ပစ်မှတ်တွေကို ထိရောက်ခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ ထရိတ်စွန့်စားမှုက 150 point ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုက 300 point ဖြစ်ပါတယ်. စွန့်စားမှုနှင့်အောင်မြင်မှုအချိုးက ၁း၂ ဖြစ်ပါတယ်. ထိုဟာက ၃% စွန့်စားမှုယူခဲ့တောင် အမြတ်ကျပ်ကျပ် ၆% ဘဲရနိုင်ပါတယ်.
ဒီနည်းက နာရီတိုင်းနှင့် ၄ နာရီပြဇယားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်.
ထရိတ်ဒင်း tool များ - stochastic နည်းလမ်းကို ဒီနည်းဗျူဟာမှာပေါင်းစပ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း အသုံးချပါတယ်:
%K period (အချိန်) = 10
%D period (အချိန်) = 3
Price field (ဈေး) = high/low
MA method = simple (ရွေးပါ)
Level တွေက 20 နှင့် 80 ပါ
သတိပေးချက် - stochastic က အင်ဒီကေတာတစ်ခုပါ. ထိုဟာကို overbought အလွန်အကျွံဝယ်ယူမှုနဲ့ ရောင်းချမှုအခြေအနေတွေကို တိုင်းတာရာမှာအသုံးချပါတယ်.
ငွေကြေးအတွဲများ - ယူရို/ဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာ/ယန်း၊ ပေါင်/ဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာ/ဆွစ်ဖရန့်၊ ဒေါ်လာ/ကနေဒါဒေါ်လာ နဲ့ နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ/ဒေါ်လာတို့ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီနည်းဗျူဟာရဲ့ အခြေခံအယူအဆက ဈေးကွက်မှာထရိတ်ရပ်တန့်တဲ့ အချိန်ပြီးရင်range အကွာဝေးကို ပြုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာပါ. Stochastic က range အကွာအဝေး ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေတွေကို သိရှိဖို့ရာ ကူညီပေးပါတယ်. ရောင်းသင့်လား ၀ယ်သင့်လားဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့ လက်ရှိဈေးကွက်ရဲ့ အဟုန်ကို တစ်ချက်တော့ အာရုံစိုက်ကြည့်ရပါမယ်. ဈေးကွက်အတက်ဘက်သွားခဲ့ရင် range ထားမှာ အ၀ယ်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်. အ၀င်နှုန်းကို Stochastic အကူအညီနဲ့ သိနိုင်ပါတယ် ( oversold အရောင်းလွန်ထားတဲ့ အပိုင်းရဲ့ level ၂၀ အောက်မှာဖြစ်သင့်ပါတယ်). ဈေးကွက်က အကျဘက် (အဆင်း) ဖြစ်ခဲ့ရင် အရောင်းကို range ထဲမှာပဲဖွင့်သင့်ပါတယ်. ဒီတစ်ခါမှာလည်း အ၀င်နှုန်းကို overbought အ၀ယ်လွန်ထားတဲ့ နေရာမှာ Stochastic အင်ဒီကေတာအကူအညီနဲ့ (Level 80 အထက်) သိနိုင်ပါတယ်. ပါဝါရိမ်းဂျား နည်းဗျူဟာမှာ အမြတ်ရနိုင်တဲ့ပစ်မှတ် ၂ခု ရှိပါတယ်. ပထမတစ်ခုကို range ထဲမှာပဲထားပါ. ဒုတိယတစ်ခုက breakout ထိုးတက်/ကျ ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာမျှော်လင့်ချက်နဲ့ range ရဲ့ အလွန်မှာ ထားပါ.
၁။ အတက်လမ်းကြောင်းကို ရှာပါ
၂။ level 20 အောက်သွားဖို့ (oversold အရောင်းလွန်ထားတဲ့ အပိုင်း) stochastic (%K နဲ့ %D အတွက်) ကိုကြည့်ပါ.
၃။ range ရဲ့ support နဲ့ resistance ကိုရှာပါ. stochastic က အရောင်းလွန်တဲ့အပိုင်း (level 20 အထက်) ၀င်ရောက်သွားရင် အ၀ယ်ဖွင့်ပါ
၄။ အမြတ်အတွက် ပစ်မှတ်ကို range ရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်းနှုန်းမှာထားသင့်ပါတယ်. stop loss ကို (risk to reward အချိုး) စွန့်စားမှု/အမြတ် အချိုး ၁း၂ မှာထားပါ. တွက်ချက်မှုအပြီးမှာ stop loss ကို support အောက်မှာထားရပါမယ်. မထားဘူးဆိုရင် ထရိတ်လုပ်တာ ဒီနည်းအတိုင်းမဟုတ်တော့ပါဘူး.
သတိထားပါ. stochastic က အရောင်းလွန်ထားတဲ့အပိုင်းရောက်တိုင်း ၀ယ်ဖို့၊ အ၀ယ်လွန်တဲ့အပိုင်းရောက်တိုင်း ရောင်းဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. ဈေးကွက်မှာ မ၀င်ရောက်ခင် Momentum အဟုန်ကို သေသေချာချာသိသင့်ပါတယ်